Siyaasi Kenyan oo kashifay ciidamo dhowaan Somalia ku dhintay oo ay dowladdu ka gaabsatay (Walaalkii oo ku jira) | Hadalsame Media
Home Wararka Siyaasi Kenyan oo kashifay ciidamo dhowaan Somalia ku dhintay oo ay dowladdu...
Siyaasi Kenyan oo kashifay ciidamo dhowaan Somalia ku dhintay oo ay dowladdu ka gaabsatay (Walaalkii oo ku jira)
(Nairobi) 18 Maarso 2022 – James Ole Kiyiapi oo la dhashay Xoghayihii Joogtada ee Wasaaradda Waxbarashada Kenya ayaa ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Kenya ee Isniintii ku dhintay gaari ay la socdeen uu dul maray walxaha Gobolka Gedo ee Soomaaliya.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegay in ugu yaraan 9 sarkaal oo KDF ah ay naftooda ku waayeen dhacdadii galabnimadii Isniinta tiro aan la garanaynna ay ku dhaawacmeen.
Wararka ayaa sheegaya in askarta KDF ay ku sii jeedeen dhanka Soomaaliya iyagoo ka yimid dhanka Kenya halkaasoo ay ugu gudbeen biyo dhaamin, markii uu dhacay falkan oo lagu eedeeyay Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Ole Kiyiapi ayaa ku sheegay hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka in aan wali si rasmi ah loo shaacin faahfaahinta dhimashadooda oo ay dowladdu qarisay waloow ay u dagaalameen dalka, sida uu yiri.
“Waan argagaxsan ahay waana murugeysan ahay. Walaalkey Johnson Olemoi Kiyiapi ayaa ka mid ahaa askartii lagu diley Soomaaliya, iyadoo loo adeegsaday walxaha qarxa ee macmalka ah. Balse hal war lagama samaynin waxay u dhinteen iyagoo aan la aqoonin.” ayuu Kiyiapi soo tweet gareeyay.
Inkastoo laga saaray meelo badan oo ay haysteen misna Al-Shabaab ayaa waxay sii wadaan sameynta habab cusub oo ay ku gaysan karaan khasaare badan, sida adeegsiga walxaha qarxa ee macmalka ah.
Ciidamada Kenya oo tan iyo markii ay Somalia ku galeen howlgalkii ay u bixiyeen “operation Linda Nchi”, islamarkaana khasaaraha gaarey uu ugu waynaa midkii xerada Ceel Cadde, ayaan marna dadwaynaha la wadaagin wixii dhib ah oo kasoo gaara Somalia.
Previous articleWasiirka Gaashaandhigga Maraykanka oo si wanaagsan u sharraxay sabab ay uga cabsanayaan samaynta aag dayuuradaha ka caaggan
Next article”Waa la fahmi waayey!” – Dad qoonsaday hadal ay Ilhaan Cumar ka tiri kulankii wefdiga Somaliland